Nhoroondo yekambani | Zhongrong Technology Corporation Co., Ltd.
Kusimudzira kufambira mberi kwenzanga kuburikidza nesainzi sainzi hunyanzvi
Zhongrong Technology Corporation Ltd (stock code: 836455), yakavambwa muna1999 inova imwe yemabhizinesi eChina National High-Tech anoshanda muR & D, kugadzirwa uye kushambadzira kweiyo isiri yezviyo ethanol nezvigadzirwa zvayo zvepasi. Iyo ndiyo hombe isinganetsi zviyo ethanol inogadzira muChina, uye muhombe acetate mugadziri muNorth yeChina neNorth-East China. Izvo zvigadzirwa zvakatengeswa kune ese ari maviri misika yepamba uye Asia, nyika dzeEurope pamwe negore rega rekutora USD150 mamirioni. Iine makambani maviri anobatsira-ega, Tangshan Zhongrong Technology Co, Ltd. uye Shanghai Zhongrong Technology Co, Ltd.
Isu tinotarisa paminda yeiyo biochemical indasitiri, mishonga yemakemikari, makemikari akanaka uye nyowani simba nechinangwa chekusimudzira kufambira mberi kwenzanga kuburikidza nesainzi yesainzi hunyanzvi inotarisa paR & D, kugadzirwa, kushambadzira kweiyo isiri yezviyo ethanol pamwe nezvayo zvekumusoro uye zasi kwezvigadzirwa, uye unozvipira kuve unonyanya kukwikwidza kupa mutengesi weiyo isiri yezviyo ethanol.
Zhongrong Technology Corporation Ltd muridzi 3 weProvince R&D Center uye yawana zvinopfuura gumi nesere uye tekinoroji budiriro iri pamusoro pemhuri inotungamira nhanho, pamwe neanopfuura makumi mana makumi mana epasirose & epamutemo patent. Kukudzwa kukuru kuti takaita chirongwa cheNational Torch uye neNational Key Nyowani Chigadzirwa Chirongwa. Isu tiri kambani yekutanga muChina kukudziridza isiri-gorosi ethanol uye kuita budiriro pamwe neakanangana patents. Tine vakuru manejimendi uye tekinoroji matarenda kubva kumayunivhesiti mazhinji ane mukurumbira, uye tave ivo vakatanga uye constitutor weChina ethyl ethanol indasitiri standard.
Zhongrong Technology ndiye director director unit yeChina Alcohol Association, director unit weChina Green Development Alliance, uye neinjiniya yekuratidzira yekuratidzira bhizinesi muChina peturu uye makemikari maindasitiri. Kwemakore, isu takaunganidza zvakakwana zvenguva refu mushandirapamwe vatengi uye takaumba yakafara yekutengesa network system, iyo isingangofukidze nyika yese chete, asi zvakare inotengesera kumisika yeAsia, European neSouth America. Pamusoro pechinyakare Internet yekutengesa inosimudzira, kambani yakasainawo chibvumirano chekudyidzana pamwe neakakura-makemikari chigadzirwa chakabatanidzwa chikuva kubvumidza zvigadzirwa zvekambani kushandira vatengi vazhinji. Isu tinovimba vanhu vane pfungwa dzakakwirira vanogona kuve vatengi vedu.
Kubva pane isiri-yezviyo ethanol, isu tiri kusimudzira kuvakwa kweethanol yekugadzira chirongwa tichishandisa simbi indasitiri muswe gasi, nekuvandudza cellulosic ethanol tekinoroji, ichiona kuitiswa kwehupfumi hunogoneka maindasitiri, uye panning kusvika mamirioni miriyoni eethyl ethanol yekugadzira kugona mukati 3-5 makore. Panguva imwecheteyo, tiri kushandisa gasi yemuswe kutora hydrogen, kuongorora pamusoro pekukosha-kwakawedzera zasi maficha ehydrogen simba, uye kuvaka rakachena simba base.
Production chinzvimbo kuratidza
Iyo kambani inonyanya kutarisa pamhando mbiri dzetechnical nzira: chemakemikari uye ehupenyu maitiro. Pakati pavo, kugadzirwa kwegore rega kwemazana matatu emakumi ematani emafuta ethanol ekugadzira michina ichishandisa indasitiri yesimbi muswe gasi, goho regore remakumi mashanu ezviuru ematani eethyl ethanol yekuratidzira chishandiso uchishandisa biogas, uye zviuru gumi zvematani e1,6-hexane michina michina ndeyedu yakazvimirira hunyanzvi hwekugadzira. mumakore mashanu apfuura.
Ikozvino kugadzirwa kwekugona: 150,000 matani eEthyl Ethanol, mazana matatu emazana eEthyl Acetate, zviuru makumi mashanu zvematani Edible Alcohol, 15,000 matani eN-propyl acetate, zviuru gumi zvematani 1,6-hexanediol, uye 4000 matani eEnzyme.